सविता माताले पनि बोलिन् चितवन घटनाबारे, सविताको कसरी भयो यस्तो हालत खोलिन यस्तो रहस्य ? हेर्नुहोस पुरा भिडियोमा – Sandesh Press
June 8, 2021 440
एक वर्ष देखि सामाजिक सजालमा नदेखिएकी सविता माता चितवनको घटनामा आफ्नो राय दिँदै सार्वजनिक भएकी छन् । उनलाई चितवन घटनाको बारेमा राय लिन भन्दै कोही युट्युवर उनको आश्रममा पुगेपछि उनले यसवारेमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कसैको चरित्रको कुरा गर्ने अधिकार आफुलाई नभएपनि उनले केही कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
चितवनकी सविता भण्ण्डारीको निधनको घटनामा उनले धेरै कुरा आफुले भन्न नचाहेको उनले बताइन् । सवितालाई आफुले नचिनेका कारण उनको स्वभाव कस्तो छ भन्न नसकिने बताइन् । उनले सविताको अमाजुको श्रीमान र सविताकै श्रीमान पनि मिडियामा सार्वजनिक भएका कारण उनको भने आफुले युट्युवमा अनुहार देखेको बताइन् । उनले सविताको श्रीमानको अनुहार देख्दा उनलाई यि दुई जनाको विवाह कसरी भयोहोला भन्ने लागेको बताइन् ।
घटना भएको एक महिना पछि चर्चित भएको यो घटनामा उनले सविता र उनको श्रीमानको चिना नजुरेको हुनसक्ने बताएकी छन् । मैले युट्युवमा अनुहार देखे मलाई लाग्यो यिनीहरुको विवाह कसरी भयो होला ? भन्ने लाग्यो । उनले हेराउने र देखाउने गरेर मात्र विवाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव हो । हुँदै नहुने विवाह गरिदिएका कारण यस्तो घटना भएको हुनसक्ने बताएकी छन् । उनले श्रीमानको अनुहार हेर्दा आफ्नो मनमा त्यस्तो कल्पना आएको बताइन् ।एक वर्ष देखि सामाजिक सजालमा नदेखिएकी सविता माता चितवनको घटनामा आफ्नो राय दिँदै सार्वजनिक भएकी छन् । उनलाई चितवन घटनाको बारेमा राय लिन भन्दै कोही युट्युवर उनको आश्रममा पुगेपछि उनले यसवारेमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कसैको चरित्रको कुरा गर्ने अधिकार आफुलाई नभएपनि उनले केही कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
घटना भएको एक महिना पछि चर्चित भएको यो घटनामा उनले सविता र उनको श्रीमानको चिना नजुरेको हुनसक्ने बताएकी छन् । मैले युट्युवमा अनुहार देखे मलाई लाग्यो यिनीहरुको विवाह कसरी भयो होला ? भन्ने लाग्यो । उनले हेराउने र देखाउने गरेर मात्र विवाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव हो । हुँदै नहुने विवाह गरिदिएका कारण यस्तो घटना भएको हुनसक्ने बताएकी छन् । उनले श्रीमानको अनुहार हेर्दा आफ्नो मनमा त्यस्तो कल्पना आएको बताइन् ।
Prevदाजु रोजगारीको लागि बाहिर, घरमा बुवाको निधन भएपछि मृत्यु पछि सन्तानले गर्नुपर्ने सबै संस्कार आफैले गरिन
Nextश्रीमानलाई मृत्युवाट त बचाएँ तर बिएण्डसी अस्पतालमा ८ लाख तिर्न नसक्दा घर लान पाएकी छैन
सबिता माताले गरिन २०७८ सालको नेपालको ड’रलाग्दो भबिस्यवाणी (हेर्नुहोस भिडियो)
यास चक्रपातका कारण शनिवारसम्म भारी वर्षा हुने, सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह (८ बुँदे विज्ञप्ति)
तपाईमा यस्ता संकेत देखिए ? उसोभए तपाईलाई छ हाई ब्लड सुगर